အထက်တန်း ကျောင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိသည့်အနက် သိပံ္ပခန်းရှိ ကျောင်း ၁၅ဝဝ ကျော်သာရှိ သိပ္ပံပစ္စည်းပြည? - Yangon Media Group
အထက်တန်း ကျောင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိသည့်အနက် သိပံ္ပခန်းရှိ ကျောင်း ၁၅ဝဝ ကျော်သာရှိ သိပ္ပံပစ္စည်းပြည?
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာအထက် တန်းကျောင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိ သည့်အနက် သိပ္ပံခန်းရှိသည့်ကျောင်း မှာ ၁၅ဝဝ ကျော်နှင့် သိပ္ပံပစ္စည်း ပြည့်စုံသောကျောင်းမှာ ၄၅ဝ ကျော်သာရှိကြောင်း သိရသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေ ခံပညာဦးစီးဌာနလက်အောက် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် ကျောင်းခွဲပေါင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိ ပြီး သိပ္ပံခန်းရှိသောကျောင်းမှာ ၁၅၂၇ ကျောင်းရှိကာ သိပ္ပံပစ္စည်း ပြည့်စုံသောကျောင်းမှာ ၄၅၅ ကျောင်း သာရှိကြောင်း အဆိုပါကျောင်း များတွင် သိပ္ပံပစ္စည်းများဖြင့် လက် တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့် အပိုင်းများ ရှိနေသေးကြောင်း ယခုလ ၂ဝ ရက်နေ့ကကျင်းပသော အမျိုးသား လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှ သိရ သည်။
”အချို့သော အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ ကျောင်း ခွဲတွေမှာ သိပ္ပံပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်းက ၄၅၅ ကျောင်းပဲရှိတဲ့ အတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ် နိုင်မယ့် ဆရာဆရာမတွေလုံလောက် ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သိပ္ပံပစ္စည်း တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုသလို အ ရည်အချင်းမြင့်တဲ့ သင်တန်းတွေ ပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အလိုက် ခွဲဝေရရှိတဲ့ဘဏ္ဍာ ငွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး က ပြောကြားခဲ့သည်။
ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဦးမာန်လောမောင်း မေး မြန်းသော မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း တွင်(ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ) သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို သိပ္ပံခန်းတွင် လက်တွေ့သင်ကြားခြင်းများအား ပြန်လည်၍ အလေးပေးဆောင်ရွက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်းအပေါ်ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးက အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ တွင် ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်များကိုသိပ္ပံခန်းများ၌လက်တွေ့သင်ကြားရန် သင်ခန်းစာ ခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ထားခြင်း၊သိပ္ပံပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဓာတ်ဆေး ပစ္စည်းများထားရှိခြင်း၊ အချိန်ဇ ယားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန် ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နဝမတန်းအဆင့်တွင် ရူပဗေဒ စမ်းသပ်ချက် ၁၄ ခုရှိပြီး အနည်း ဆုံး ၁ဝ ခုစမ်းသပ်ရန်၊ ဓာတုဗေဒ စမ်းသပ်ချက်ကိုးခုတွင် အနည်း ဆုံး ခြောက်ခုစမ်းသပ်ရန်၊ ဇီဝဗေ ဒစမ်းသပ်ချက်အခန်းလေးခန်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် မှာကြား ထားကြောင်း ဒသမတန်းအဆင့် တွင် ရူပဗေဒစမ်းသပ်ချက် ၁၆ ခု ရှိပြီး အနည်းဆုံး ၁၂ ခုစမ်းသပ် ရန်၊ ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်ချက်ရှစ် ခုတွင် အနည်းဆုံး ခြောက်ခုစမ်း သပ်ရန်၊ ဇီဝဗေဒစမ်းသပ်ချက်အ ခန်းကိုးခန်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ရန် မှာကြားထားကြောင်း သိရ သည်။
ကချင် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ရေး
မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ခွဲ ချုံးဟောင်းကျေးရွာ၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် ဒေသခံ ၄၁ ဦး ကျော??
မင်နီဆိုတာပြည်နယ် ဒီမိုကရက်ပါတီမှ ကလိုဘူချာ ၂ဝ၂ဝ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
စိန့်ဂျိမ်းပတ်ခ် ကျိန်စာဆိုးကို ချေဖျက်ရန် နည်းပြမော်ရင်ဟို ရည်မှန်း၊ ပေါ့ဘာနှင့် မိမိအြ??
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း၏ မတ်သေဆုံးမှု သတင်းအမှားတင်သူ မင်း?